कोरोना Archives - ejhajhalko.com
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका ६ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना देखिएपछि आकस्मिक कक्ष सिल
२९ साउन,काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्ष सिल गरिएको छ । बुधबार टिचिङ अस्पतालको आकस्मिक कक्षका ४ जना स्टाफ नर्स र २ जना डाक्टरलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । उनीहरुलाई कोरोना देखिएपछि बुधबार नै आकस्मिक कक्ष सिल ...
२६ साउन,काठमाडौँ । नेपालमा थप ३ सय ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर ३ सय ३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले जनाएका छन् । गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा ८ हजार ४ सय ३२ नमुना परीक्षण गर्दा थप ३३८ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । योसँगै नेपालमा क...
२५ साउन,पोखरा । पोखरामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) संक्रमित एक पुरुषको मृ'त्यु भएको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचाररत ६२ वर्षीय पुरुषको मृ'त्यु भएको हो । मधुमेहका रोगीसमते रहेका उनको गएराति ११ः३५ बजे मृ'त्यु भएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस...
२३ साउन, सिरहा । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण पुष्टि भएका सिरहाका एक जना युवाको मृ'त्यु भएको छ । सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–१२ का २३ वर्षीय अशोक महतोको बुधबार धरानमा उपचारको क्रममा मृ'त्यु भएको हो । उनको श'व सिरहा ल्याउने र नेपाली सेना दाह संस्कार गर्ने तयारी भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाका प्र...
२२ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विहिबार प्रचण्डको निजी निवासको बाहिरी घेराको सुरक्षामा खटिएका ६ जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो । प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सा...
थप दुई सय २४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कहाँ कति ?
१६ श्रावण , काठमाडौं । नेपालमा आज थप दुई सय २४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टि भएको छ । योसँगै अहिलेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या १९ हजार सात सय ७१ पुगेको हो। यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा एक सय ५१ जना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार निको भएर घर फ...
काठमाडौं उपत्यकामा थप १८ प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी
१६ श्रावण,काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका १८ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा गरिएको स्वाब सङ्कलनको परीक्षणबाट आज बिहानमात्र थप १८ प्रहरीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। प्रहरी प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा ७२ र उपत्यका ब...
आज थप २१० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
१४ असार, काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार २ सय १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना पुष्टि हुनेमध्ये काठमाडौंमा १४ र भक्तपुरमा १ गरी उपत्यकामा ...
स्याङ्जाका प्रहरी प्रमुखसहित १८ प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
१२ श्रावण, पोखरा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुखसहित १८ प्रहरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख एसपी विमलराज कँडेलसहित १८ प्रहरीमा सोमबार कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । स्याङ्जाका प्रमुख एसपी विमलराज कँडेलसहित२१ प्रहरीमा कोरोना देखिएपछि पुतलीबजारभित्र कडाई गरि...
पोखराको मणिपालमा कार्यरत चिकित्सक र गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक नर्समा कोरोना संक्रमण पुष्टि
१२ श्रावण, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका दुईजना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्‍टि भएको छ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक नर्समा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । स्रोतका अनुसार सोमबार मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक पुरुषमा र गण्डकी मेडिकल कलेजमा कार्यर...
न्यायधीशलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि
११ साउन, सप्तरी । नेपालमा न्यायाधीशमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आइतबार सप्तरीमा एक जना न्यायाधीश मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो । उच्च अदालत जनकपुरधामको राजविराज इजलासमा कार्यरत ५८ वर्षीय न्यायाधीशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख दुनियाँलाल यादवले ...
नेपालमा आज थप १०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
२५ जेठ,काठमाडौँ । नेपालमा आज थप १०८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विगत २४ घण्टामा थप १०८ जनामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । यो सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या १६ हजार ५३१ जना पुगेको छ। तीमध्ये ७,८९१ जना निको भएका छन् भने ३५ जन...
२० असार, गोरखा । गोरखामा कोरोना संक्रमित पुरुषको ज्यान गएको छ । जिल्लाको पालुङटार नगरपालिका ७ निवासी ४४ वर्षिय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । गए राति दश बजे आइसोलेसन वार्डमा सारिएका उनको बिहान ५ बजेर ५ मिनेट जाँदा मृत्यु भएको गोरखा अस्पतालले जनाएको छ । मृतक पुरुष निमोनियया र डाइबेटिजका दिर्घरोगी भएक...